AKHRISO:- Khilaafka Galmudug oo Weji kale Yeeshay + Odayaasha dhaqanka oo cabsi kale bilaabay. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
AKHRISO:- Khilaafka Galmudug oo Weji kale Yeeshay + Odayaasha dhaqanka oo cabsi kale bilaabay.
Odayaasha Galmudug oo Kulan ku yeeshay Magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in Xildhibaanada laga badiyo 89 mudane, iyagoona ku goodidiyay cidii arintaasi Ku dhaqaaqda tilaabo cad ah ay ka qaadi doonaan.
Waxgaradka ku shiray Dhuusamareeb ayaa sidoo kale sheegay haddii Ahlusunna la siiyo 35 Xildhibaan in aysan ka qeyb gali doonin dhismaha maamulka Galmudug.
Qoraalka ay soo saareen Odayaasha dhaqanka ayaa lagu sheegay in Dowlada Soomaaliya iyo Ahlusunna midna aysan awood u lahayn soo Xulista Xildhibaanada Maamulka Galmudug ee Bartamaha Soomaaliya.
Warka ka soo Baxay odayaasha dhaqanka ayaa daba Socda heshiis qorsoodi ahaa oo ay wada galeen Dowlada Soomaaliya iyo Ahlusunna, kaas oo maalin ka hor Ahlusunna soo bandhigtay,heshiiskaas oo ay ku xusneed in Xildhibaanada Maamulka Galmudug,35 ka mid ay soo xulaan hoggaanka Ahlusunna.
Previous articleCaalamka oo Soojeediyey Soomaaliya In Cuna Qabataynta Laga Qaado
Next articleQM oo markale shaacisay in la filayo saamayn aan horay loo arag oo kusoo kordha Fatahaadaha hadda laga Cabanayo.
Garmaqaate October 31, 2019 At 5:39 pm
Waxay u heshiin la yahiin oo ay isu dilayaan oo ay u la yahiin meel ay fariistaan waa dhiigii iyo xaqqii umadihii ay xasuuqeen oo ay xalaashadeen xoolahoodii.Haybtoo dhan dambiyo ma wada leh ee kuwii dambiilayaasha ahaa baa wali qaar ku dhexjiraa.Meel ay kuwaasi joogaana wanaag ka hirgali mahayo.
Dab La Ridey November 1, 2019 At 1:48 pm
Afar nin oo guugo ay oo shufto ah aya Guri u soo dhacay markaasay la yaabeen xoolaha iyo dahabka meesha yaala, halki bay ku kala qaysadeen xoolihi laakin waxay arkeen Gabadh qurux badan oo guriga huruda xuural-cayn ah, Markaasa mid yiri Gabadha aniga qaadaya oo guursanaya, tuugi kale aya yiri maya aniga qaadanaya oo guursanaya, kii saddexaad iyo kii afraad ayaa sheekaddi diiday oo yiri qof aan aniga ahayn qaadan maayo.
Afarti nin waxay garan waayeen xoolihi guriga waad wada qaybsateene gabadhan isaga taga oo ka carara meeshan.
Halki bay ku dagaalameen aniga gabadhu ii qalanta iyo maya anigay ii qalanta kadibna xabad iyo mindiyo ayey iskala daaleen.
Haatan habargidir markay Qaranka boobeen oo ummadda boobee ayey hadda isku haystaan Xukunka Gal-mooryaan anigay igu fiican tahay iyo maya anigay igu fiican tahay.
Habarkintir kuligood dembi bay wada galeen qofka maanta leh iljeex dembi ma wada gelin waa GAAL aan ilaahay ka baqayn.
GACAN KU DHIIGLE……. ILJEEX
LUG KU DHIIGLE …………ILJEEX
INDHO KU DHIIGLE……..ILJEEX
TALO KU DHIIGLE………..ILJEEX
LACAG KU DHIIGLE……..ILJEEX
QALBI KU DHIIGLE………ILJEEX
Generation ka iljeex ee maanta jira kuligood waa gacan ku dhiiglayaal BEENTA HA LA JOOJIYO